सुर्खेतमा भीरबाट खसालेर दर्जनौं गाईको सामुहिक हत्या, हत्यारा को हो ?
सुर्खेतमा भीरबाट खसालेर दर्जनौं गाईको सामुहिक हत्या, हत्यारा को हो ?
सुर्खेत - सुर्खेतमा दर्जनौं गाई भीरबाट खसालेर मारिएका छन् । नेपालगंजबाट नियन्त्रणमा लिइएका छाडा चौपाया सुर्खेतमा ल्याएर भीरबाट खसालिएको हो । नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएर काञ्जिहाउसमा राखिएका गाई सुर्खेतमा भीरबाट खसालेर मारिएका छन्।
नेपालगंजबाट ट्रकमा राखेर ल्याइएका2सय ९१ वटा गाईमध्ये वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवाको जंगलमा करिब तीन दर्जन गाई मरेको अवस्थामा भेटिएका छन् । प्रहरीका अनुसार बिहीबार नेपालगंजबाट दैलेख लैजाने भनि ल्याइएका ती गाई भीरबाट खसालेर मारिएका हुन् । रातको समयमा भीरबाट खसालिएका मध्ये डेढ सय भन्दा बढी गाई घाइते छन् । आठ वटा ट्रकमा ल्याइएका गाई भीरबाट खसालिएको र जंगलमा छाडेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार मरेका गाईको विवरण संकलन भइरहेकाले अरु धेरै संख्यामा मरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यति ठूलो संख्यामा गाई कसले किन भीरबाट खसाल्यो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको सुर्खेतका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उदयसिंह सिंजापतिले बताए । प्रहरीका अनुसार गाई छाडेर फिर्ता भएका ट्रकलाई बबईबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएका छाडा चौपाया दैलेखतर्फ पठाएको बुझिएको छ । उपमहानगरपालिकाको पशुचौपाया व्यवस्थापन शाखाले दैलेखको श्रीस्थान क्षेत्रका नागरिकले गाई पाल्ने बताएपछि त्यसतर्फ गाई पठाइएको जनाएको छ।
तर गाई दैलेख नपुग्दै बीचमै भीरबाट फालिएका हुन् । खुला सिमानाका कारण भारतबाट भित्रिएका र नेपालगंजमै रहेका छाडा गाईलाई उपमहानगरले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि दैलेखतर्फ पठाएको थियो ।
मरेका र घाइते रहेका गाईमध्ये केहीको कानमा ट्यागसमेत लगाइएको छ । करिब तीन सयको संख्यामा गाई भीरबाट खसालिएको र जंगलमा छाडिएको भेटिएपछि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Copyright © 2019. All Rights Reserved Duniya Khabar